Ku barbaarinta ku-beddelka iyada oo loo marayo Warbaahinta Iibka Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Kordhinta Ku-beddelka iyada oo loo marayo Warbaahinta Iibka Warbaahinta Bulshada
Jimco, Juun 25, 2014 Arbacada, Agoosto 30, 2017 Douglas Karr
Xogtan layaabka leh ee ay maalgelisay TollFreeForwarding waxay ku socotaa celceliska ganacsiga ama suuqgeynta iyada oo loo marayo 6 fure si loo gaaro wadista iibka iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada: Wacyigelinta, Xiisaha, Beddelka, Iibinta, Daacadnimada iyo U doodista.
Meelaha iibka ayaa loo isticmaalay adduunka suuqgeynta maxaa yeelay waxay bixiyaan hab lagu fududeeyo oo lagu muujiyo waddada macaamilka laga bilaabo ugu horreyn ilaa tallaabada ugu dambeysa. Dhaqan ahaan tan macnaheedu waxa weeye barta ugu horreysa ee wacyiga illaa iibka, laakiin adduunyada bulshada ee maanta, way ka sii dheereysaa intaas. Jodi Parker
77% dadka wax iibsada ee internetka waxay la tashadaan qiimeyn iyo dib u eegis ka hor intaanay wax iibsan 80% macaamiishooduna waxay filayaan in ganacsiyada ay firfircoon yihiin warbaahinta bulshada
Warbaahinta bulshada waa mid dhexdhexaad ah oo aan la mid aheyn meel kale oo aadan fursad u helin inaad wax iibiso, waxaad fursad u leedahay macaamiishaadu inay ku iibiyaan magacaaga! Waan hubaa hadaad gasho barnaamij kasta oo bulsho maanta, waxaad ka heli doontaa dad raadinaya alaabtaada ama adeegyadaada. Ma joogtaa marka ay ku weydiiyaan? Macaamiishaadu ma joogaan oo sidaas ayey kuugu faraxsan yihiin oo ay ka jawaabaan?
Waa kuwan sawir-gacmeed qeexaya muuqaalka guud ee quruxda badan Masraxa Beddelka Warbaahinta Bulshada:
Tags: masaafada beddelka warbaahinta bulshadabeddelka warbaahinta bulshadakobcinta warbaahinta bulshadamasaafada iibka warbaahinta bulshada